Igba ọsọ ọsọ Internet
Kedu ihe nyocha ọsọ ọsọ Internet?
Nchọgharị ọsọ ọsọ internet bụ usoro nke nyochaa njikọ njikọ njikọ netwọtị site na ịpị obere faịlụ site na ihe nkesa na ịlele oge ọ na-ewe iji budata ma weghachite faịlụ ahụ na sava. N’akụkụ ahụ, a pụkwara ịgụta ọnyá dị ka njakịrị na njedebe nfe. Ụfọdụ ule ọsọ ọsọ na-atụkwa ping, nke bụ oge maka ozi iji mee njem njem site na onye na-eziga ya gaa na azụ, site na izipu ozi nchịkwa Intelligence Internet (ICMP) na onye ọbịa.
Usoro nyocha kachasị mma nwere ọtụtụ ndị sava ozi na ụwa, nke na-enye onye ọrụ ikike ịnwale ọsọ ịntanetị na ọnọdụ dị iche iche. Ọ kasị mma iji nwaazụ ihe nkesa na-ahụ maka ihe nkesa weebụ ma ọ bụ ngwa weebụ; ma ọ bụghị nke a, ọsọ a na-agba ọsọ anaghị egosipụta ọrụ ọsọ ọsọ nke onye ọrụ ahụ.
Gịnị Bụ Ping?
Ping bụ oge mmeghachi omume nke njikọ gị – lee ọsọ ọsọ ị ga – enweta nzaghachi mgbe ị zipụrụ arịrịọ. Ping ngwa ngwa pụtara njikọ na-anabata, karịsịa na ngwa ebe oge bụ ihe niile (dịka egwuregwu vidio). Eji Ping na milliseconds (ms).
Gịnị Bụ Download Speed?
Oge nbudata ngwa ngwa bụ otú ị ga – esi mee ngwa ngwa wepụ data si na ihe nkesa gị. Ejiri ọtụtụ njikọ iji budata ngwa ngwa karịa ka ha bulite, ebe ọ bụ na ihe ka ukwuu n’ime ọrụ ntanetị, dị ka ịdebe ibe weebụ ma ọ bụ vidio vidio, gụnyere ntanetị. A na-atụle ọsọ ọsọ na megabits kwa nke abụọ (Mbps).
Kedu ihe a na-ebu ọsọ?
Oge ọsọ ọsọ bụ otú ị na-esi ezigara gị ndị ọzọ ozi ngwa ngwa. Ntinye dị mkpa maka izipu nnukwu faịlụ site na email, ma ọ bụ na iji nkata vidiyo iji gwa onye ọzọ online (ebe ị ga-eziga gị ndepụta vidio ha). A na-atụle ọsọ ọsọ na megabits kwa nke abụọ (Mbps).